सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा भइरहेको छ आज कारोबार ? - नेपाल कुरा
सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा भइरहेको छ आज कारोबार ?
काठमाडौं । आज (बुधबार) नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९३ हजार २ सयमा कारोबार भएकोमा आज तोलाामा सात सयले घटेको हो । मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा चार सयले बढेको थियो ।
महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९२ हजार ५ सय रहेको छ भने तेजावी सुनको मूल्य ९२ हजार रहेको छ । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । हिजो चाँदीको मूल्य १३८० मा कारोबार भएकोमा आज घटेर तोलामा १२६० कायम गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
कोइरालाको विरोध भएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा शर्मा